निसान छापका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलार्ई कसले गर्न खोज्दैछ विषयान्तर ? | Ratopati
काँग्रेस, राजपा र समाजवादीको नियतमा प्रश्न
personफणिन्द्र नेपाल exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline1
दबाब वा प्रभावमा हुँदैछ विषयान्तर
उनले ताजा मुद्दामा एक भएर लड्नुपर्ने बेलामा दल, सरकार र नेताहरु फरकफरक ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि नेता र दलहरु कति संवेदनशील जिम्मेवार छन् भन्ने बुझ्न सकिने पनि बताए । यसो गर्दै जाँदा विवाद बढ्दै जाने र कुनै पनि प्रस्ताव पास नगरी जाऊ भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । तर प्राविधिक रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश हुने भएकाले सत्तापक्षले इमानदारिता देखाउन सके र साँच्चै नक्साको मुद्दा राष्ट्रहितका लागि नै उठाएको हो भनेर अडान लिएमा त्यतिबेला काँग्रेसले समेत नक्साको पक्षमा मत हाल्ने र अरू प्रस्ताव फेल हुनसक्ने उनको तर्क छ ।
नक्साबारे सर्वदलीय बैठकमा एकमत भएको हो : सुवास नेम्वाङ
सर्वदलीय बैठकमा लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको भूमि हो भनेर सबैले भनेका हुन् । संविधान संशोधन त्यही आधारमा अघि बढेको हो । त्यतिबेलासम्म कुनै पनि संविधान संशोधनका विषय अगाडि आएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्थात संविधानको अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित विषय हामी अगाडि लैजाँदैछौँ भनेर भन्दा सबैले सहमति जनाएका हुन् । अहिले त्यो परिपक्व पनि भइसक्यो । त्यसबेला
प्रधानमन्त्रीले अरू तपाईंहरुले राखेका र राख्ने विषयहरु हामी छलफल गर्दै अघि बढ्न तयार छौँ पनि भन्नुभएको हो । र, मेरो बुझाइमा सर्वदलीय बैठकपश्चात एकमतले पास हुने आधार तयार रभएको छ, त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । तर त्यसपछाडि विधेयकहरु आइरहेको कुरा मैले पनि चर्चामा सुनेको छु । तर हामीलाई आधिकारिक रुपमा सम्बन्धित साथीहरुले छलफल गर्नुभएको छैन । त्यसैले त्यसलाई लिएर अहिले कुनै पनि अन्यथा टिप्पणी गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।
कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसूची–३ को सरकारको संविधान संशोधन विधेयक पेश भएको छ । त्यसमा प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यसप्रति सबैको प्रतिबद्धता छ । त्यसमा अन्यथा हुँदैन । त्यो समयभित्रै पारित हुन्छ । जहासम्म अरू प्रस्तावहरु आएका छन् ती कुन प्रसङ्गमा आएका हुन् भनेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।
नक्साको विषय अरूसँग सट्टापट्टा गर्नु हुँदैन : संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य
कम्तीमा सरकार वा प्रतिपक्षसँग एकआपसमा मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । तर राष्ट्रिय मुद्दामा मतमतान्तर गर्ने कुराले फाइदा हँुदैन । भारतले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । स्वयं भारतलाई पनि यो कुरा महसुस भइसकेको छ । नेपालले नक्सामा राखिसक्यो यो एउटा तागत नेपालको बढेको छ ।
राष्ट्रियताको यस्तो मुद्दा अघि बढिसकेको अवस्थामा फेरि जुन खालका थप संशोधनका प्रस्तावहरु अघि गए यसले हाम्रो राजनीति कोहीबाट प्रभावित छ भन्ने देखिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको मुख मिलेको हो कि होइन ? भन्ने कुरा भोलि देखिएला । नत्र नक्साको विषयलाई विषयान्तर गर्न सकिन्छ कि भनेर यी प्रस्तावहरु आएका हुनसक्ने अर्को कारण हुनसक्छ । यसो गर्दैगर्दै जाँदा विवाद बढ्दै गयो भने कोही पनि मुद्दा पास नगरी जाऊँ भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर प्राविधिक रूपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश हुने भएकाले सत्तापक्षले इमानदारिता राख्यो र साँच्चै नक्साको मुद्दा राष्ट्रहितको लागि नै उठाएको हो भने त्यतिबेला काँग्रेसले नक्साको सवालमा मत जाहेर गर्नसक्छ अरू प्रस्ताव फेल हुनसक्छ । यसमा सत्तापक्षको भूमिकामा बढी भर पर्छ ।
काँग्रेसमा कन्ट्रोल सिस्टम देखिएन : डा. विपिन अधिकारी संविधानविद्
संविधान संशोधन विधेयक जसले पनि दर्ता गर्न सक्छ । त्यो संयुक्त वा एकल पनि हुनसक्छ तर सैद्धान्तिक कुरा महत्त्वपूर्ण हो । संविधान लागू भएको आज ५ वर्ष पूरा हुने तरखरमा छ । संविधान जारी भएपछि चुनाव भएको पनि ३ वर्ष हुन लागेको छ । जसले संविधानका बारेमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका थिए उनीहरुले आफ्नो प्रस्तावसहित जनतामा भोट माग्न गएका हुन् । र, जनताबाट अनुमोदित भएका पनि हुन् । त्यसबाट कसको हैसियत कति छ भन्ने पनि जनमतले प्रस्ट देखाइसकेको छ ।
अहिले जसले संविधान ल्यायो ऊ शासनमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि जसले संविधान सभाबाट आफ्नो माग पूरा गराउन सकेन र अन्य किसिमले पनि राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउन खोज्यो । निर्वाचनको यो साइकल पूरा नै नभईकन यस्तो बेला उनीहरुले नयाँ निर्वाचनका लागि पूर्वाधार बनाउन खोजेको हो भने ठीकै होला । होइन भने यस्तो किसिमको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । म्यान्डेटवाला दलले सरकार चलाउने हो प्रजातन्त्रमा । तर सानो हैसियतको पार्टीको सुविधा अनुसारका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गरिदिने हो भने जो म्यान्डेटवाला पार्टी जसलाई लाखौँ मानिसले मत दिएका छन् उनीहरुको हैसियत के हुन्छ ? यो प्रश्न नेपाली काँग्रेसबाट सुरु भएको छ ।
काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले नेपाल सरकारको निसान छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई व्याकप गर्न बैठक बोलाएको हो । तर त्यो बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका एजेन्डा घुसाइएको छ । त्यो काँग्रेसको संविधान संशोधनको चार नम्बर बुँदामा छ । त्यो फेरि पुरानै छ । ऊबेला अनुमोदन हुन नसकेको विषय अहिले ल्याउने बेला भएको थिएन । यसमा काँग्रेसको हाइकमान्डले पर्याप्त कन्ट्रोल सिस्टममा काम गर्न नसकेको देखियो । काँग्रेसलाई लागेको हुन सक्छ हामी समग्र संविधान सुधारका पक्षमा छौँ । तर त्यो सही बेला होइन । काँग्रेसले डिटरमिनेसनका साथ निसान छापलाई ब्याकप गरेको छ त्यसमा नेतृत्व समर्पित नै छ । अर्कोतर्फ चित्त बुझाउनेगरी स्थान दिइएको छ, त्यसले मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र निसान छापको विषयलाई कमजोर तुल्याउने अवस्था आउन सक्छ । जब राष्ट्रिय विषय सिमानाको कुरामा हामीसँग यो के मतलब भनिरहेका छन् भने प्रस्ट छ, ती मानिसका एजेन्डलाई संसदमा पुर्याउने कारण के हो ? भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको हो भन्ने भन्न सकिन्छ ।
अब के हुनुपर्छ सत्तापक्षको भूमिका ?
संविधानविद् आचार्यका अुनसार सत्तापक्षले सरकारी विधेयक अबिलम्म मतदानको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । उनले अरू जति पनि पनि प्रस्ताव आएका छन् । तिनलाई पनि छुट्टाछुट्टै पेश गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए । नक्साको विषयलाई अरू कुनै विषयको बहाना बनाएर सट्टापट्टा गर्न नहुने भन्दै आचार्यले अरू तमाम एमसीसी लगायतका मुद्दालाई यससँग जोड्न नहुने बताए । ‘विशुद्ध राष्ट्रको एउटै एजेन्डा नेपालको नक्सालाई संविधानमा कसरी वैधानिकता दिने भन्ने हुनुपर्छ’, आचार्यको भनाइ छ । उनले राजपा, समाजवादी र काँग्रेसले उठाएका मुद्दा नाजायज र गलत भन्न नसकिए पनि अहिलेको समयलाई ती मुद्दा उपयुक्त नहुने बताए । ‘किनभने ती विषय उठ्नेवित्तिकै नक्साको मुद्दा ओझेलमा पर्छ । यदि यो कुरामा ध्यान पुगेन भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको मिलेमतोमा बाहिर देखाउन एउटा कुरा गरे भित्री रुपमा इमानदार छैनन् भन्ने बुझिन्छ’, आचार्यको भनाइ छ ।
June 3, 2020, 9:20 p.m. Megh Raj Acharya
बिगतका कङ्रेसले कुरै निकालेनन,अहिलेको कङ्रेसको हुत्ती हुने कुरै भएन।अब कङ्रेसको बि.पि.को राष्ट्रियता भन्ने नारा हटए हुन्छ,जनताले त हटाइ सके।खै युवा नेता गगन,बिश्व र प्रदिप एण्ड प्रदिप दाई?भाषण त चर्चिलका दृष्टान्त दिन्छन त,जिवन बिपक्षिकै कुरो काटेर अमर होइन्छ?